Ezona ndlela zimfutshane zisebenzayo kwi-Illustrator icandelo II | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ezona ndlela zimfutshane zisebenzayo kwi-Illustrator icandelo II
UFran Marin | | Umzekeliso, Amaqhinga
Kwinxalenye yokuqala senze udibaniso oluncinci kunye neendlela ezimfutshane ezinqumlayo. Kolu luhlu lwesibini, sikunika uluhlu lwemiyalelo enokusebenza ngokulinganayo, nangona oku kuya kuxhomekeka kwindlela esisebenza ngayo kunye Indlela elandelwa ngumyili ngamnye. Ukuba unayo nayiphi na ingcebiso okanye igalelo, unganqikazi, Sixelele!
Imiyalelo yahlulwe yala mapaneli alandelayo okanye iinketho:
Cwangcisa indawo yemvelaphi xa usebenza ngokujikeleza, ukubonakalisa isikali okanye izixhobo zokugqwetha: Alt / Option + Cofa.
Phinda kabini kwaye uguqule ukhetho xa usebenza ngokujikeleza, isikali, isipili, okanye izixhobo ezigqwethekileyo: Alt / Option + Tsala.
Guqula i-motifs xa usebenza ngokujikeleza, isikali, isipili okanye ukugqwetha: > + Tsala.
Hambisa isikhombisi igama elinye ekhohlo okanye ekunene: Ctrl / Cmd + Ekunene / ngasekhohlo iTolo.
Hambisa izifundo umhlathi omnye phezulu / ezantsi: Ctrl / Cmd + phezulu / ezantsi iTolo.
Ukulungelelanisa umhlathi ngasekhohlo, ekunene okanye embindini: Ctrl / Cmd + Shift + L / R / C.
Cacisa umhlathi: Ctrl / Cmd + J. usetyenziso lweWindows kwi- Ivenkile yeWindows
Yandisa okanye unciphise ubungakanani bokubhaliweyo: Ctrl / Cmd + Shift +, (ikoma) /. (yalatha).
Yandisa / Nciphisa isithuba somgca: I-Alt / Ukhetho + phezulu / iTolo elisezantsi (isicatshulwa esimi nkqo) kunye neTolo lasekunene / sasekhohlo (isicatshulwa esithe tyaba)
Bonisa / fihla zonke iipaneli: Ithebhu
Bonisa / fihla zonke iipaneli ngaphandle kwesixhobo kunye nolawulo lwepaneli: Shift + Tab.
Khetha uluhlu lweZenzo, iiBrashi, iiLayers, Amakhonkco, iZitayile, okanye iiSwatch: Shift + Cofa.
Vula ibhokisi yencoko yababini: Cofa kabini kwibrashi.
Phinda kabini ibrashi: Tsala ibrashi kwiqhosha "elitsha lebrashi".
Guqula ukugcwalisa okanye ukubetha kungasebenzi: Alt / Ukhetho + Cofa kwibar yombala.
Guqula imo yombala: Shift + Cofa kwibar yombala.
Phinda umbala uyeke: Alt / Option + Tsala.
Faka umbala kwindawo yokumisa umbala esebenzayo: I-Alt / Ukhetho + Cofa kwi-swatch kwipaneli ye-swatches.
Khetha zonke izinto kuluhlu: I-Alt / Option + cofa kwigama lomaleko.
Veza okanye ufihle zonke iileya ngaphandle kwale ikhethiweyo: Alt / Option + Cofa kwi icon yamehlo.
Tshixa okanye uvule kuzo zonke ezinye izaleko: I-Alt / Option + Cofa kwi icon yokutshixa.
Iphaneli yokubonisa elubala:
Khubaza imaski yokukhanya: Cofa kwi-thumbnail yocingo + Shift.
Yandisa / yehlisa ukungahambi kakuhle kumanyathelo e-1%: Cofa kumhlaba opacity + Phezulu / ezantsi iintolo.
Yongeza / yehlise ukungasebenzi kwinqanaba le-10%: Shift + Cofa kumhlaba opacity + Phezulu / ezantsi iintolo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Umzekeliso » Ezona ndlela zimfutshane zisebenzayo kwi-Illustrator icandelo II
Molo Fran Marin! Umbuzo. Andikhumbuli ukuba kwakunjani ukongeza ii-vertices kubume bebhodi yezitshixo, umzekelo ndithatha isikwere ndiyiguqula ibe ngunxantathu okanye ipholigoni ngokudlala nje izitshixo ezibini
Iiplagi ezili-10 ezibalulekileyo zeFotohop
Uhlalutyo lweWordPress 3.9